Shiinaha ABS warshad gacmo -dhaqasho iyo soo -saare | Leto
1Model No. LT3366
Madaxa qubeyska ABS oo tayo sare leh oo leh faallooyin wanaagsan, ku soo dhawow inqruiy.
Qubayskan gacanta ABS, waxaan sidoo kale ku siin karnaa xirmooyinka qubeyska tuubbo, haysta iyo dhagxaan. Oo waxaan leenahay naqshad cusub, sida dhagax midab leh oo ku jira qubeyska madaxa.
Ads Kuulyo khaas ah: Kuullada madaxa qubeysku waxay ka samaysan karaan nidaam shaandhayn laba -laab ah, kaas oo biyaha ka dhigi kara kuwo aad u nadiifsan, jilciya oo nadiifiya biyaha qubeyska si maqaarkaaga iyo timahaagu u noqdaan kuwo jilicsan oo jilicsan.
Pressure Cadaadis sare iyo keydinta biyaha: Farsamada biiyaha micro waxay ka dhigtaa godadka ka soo baxa kuwa yaryar oo cufan, waxay kordhisaa xawaaraha socodka biyaha, markaa waxay kordhineysaa 200% cadaadiska biyaha waxayna joogtaynaysaa socodka biyaha. Illaa 30% kaydinta biyaha marka loo eego madaxa qubeyska caadiga ah. Codso cadaadiska biyaha hoose RV.
Settings Saddex meelood oo lagu buufiyo: Roob, Jetting, Massage, saddexda nooc ee qubeyska ayaa ku habboon qubayska qaangaarka, carruurta iyo xayawaanka rabaayadda ah, u keen adiga iyo qoyskaaga khibradda qubeyska gaarka ah ee musqushaada. Intaa waxaa dheer, biyaha qulqulaya ee xoogga leh ayaa waliba kaa caawin kara inaad meel walba nadiifiso.
● Way fududahay in la rakibo: Cabbirka guud G1/2 '' wuxuu ku habboon yahay cabbirka cabbirka cabbirka caadiga ah. Looma baahna tuubiste iyo qalab, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku rakibto madaxa qubeyska sida ugu fudud oo xor ah sida ku xoqidda guluubka.
Design Naqshad adag oo waarta: Dhismo adag, dillaac la'aan. Naqshadeynta shaandhaynta cufnaanta sare ee hufan iyo aragtida ayaa fudud in la kala qaado si loo nadiifiyo.
Magaca badeecada Madaxa qubeyska ABS Lambarka Tusaalaha LT3366
Waxyaabaha ABS Dusha La safeeyey
Miisaanka saafiga ah 231g Xirxirida Bacda xumbo
Cabbirka 24*8CM Tirada xirxirida 100 PCS/kartoon
Wasakhda biyaha tuubadaada ayaa inta badan qallajin doonta maqaarkaaga waxayna u horseedi doontaa dheelitirnaan qanjidhada saliiddaada. Saamaynta daahirinta ee kuullada macdanta, madaxa qubeyska ayaa kaa caawin doona inaad soo celiso dheelitirka. Faa'iidooyinka caafimaadka waxaa ku jiri kara maqaar jilicsan, yaraynta dheecaanka saliidda, iyo kordhinta jiritaanka unugyada.
F 3 SHAQOOYINKA SPRAY: Roob, Jetting, Massage, saddex nooc oo qubeys ah ayaa kuu keenaya waayo -aragnimada qubeyska ugu fiican ee musqushaada waxayna adiga iyo qoyskaaga ku raaxeysanayaan HBS dabiici ah oo guriga ah!
% 200% DHEERAAD SARE: Farsamada biiyaha micro -ga ayaa ka dhigaysa godadka ka soo baxa kuwa yaryar oo cufan, waxay kordhisaa xawaaraha socodka biyaha, markaa waxay kordhineysaa 200% cadaadiska biyaha.
% 30% BADBAADINTA BIYAHA: Farsamada biiyaha yaryar waxay ka dhigtaa godadka ka soo baxa kuwo yar oo cufan, oo joogsiiya socodka biyaha. 1.46 GPM, ilaa 30% kaydinta biyaha marka loo eego madaxa qubeyska caadiga ah.
Noocyada Kale & Cabbirka
Cabbirka Gudaha: 8.5*8.5*25 cm
Miisaanka saafiga ah: 245 g
Miisaanka guud: 286 g
Baakadaha: Sanduuqa midabka ayaa la buuxiyey
Cabbirka kartoonka: 44*39*52 cm
Halbeeg halkii Kartoonka Dhoofinta: 100 pcs
Miisaanka guud: 26 kg
Mugga: 0.089 m³
Habka Lacag -bixinta: Bangiga TT, T/T.
Faahfaahinta Bixinta: 30-50 maalmood gudahood kadib xaqiijinta amarka
Suuqyada Dhoofinta ugu Weyn
Waxaan ku takhasusnay jikada iyo badeecadaha qubeyska muddo 13 sano ah, waxaanan la shaqaynaynay in ka badan 106 dal oo adduunka ah.
Waxaan leenahay khibrad dhoofinta hodanka ah iyo habab gaadiid oo deggan.
Macaamiil kasta waxaa loo qaabili doonaa sidii marti sharaf.
Waxaan leenahay naqshadeeyayaal sawir leh oo xirfad leh si ay u naqshadeeyaan sanduuqa midabka saxda ah sida aad jeceshahay.
Waxaa nala kaashaday 9 warshadood oo ku jira warshadan sanado badan.
Warshadeenu waxay heshay CE, RoHS shahaadooyin.
Amarada tijaabada yaryar waa la aqbali karaa, muunad bilaash ah ayaa la heli karaa
Qiimahayagu waa macquul waxaanan u haynnaa tayada ugu sarreysa macaamiisha kasta.
Hore: Warshadda Saabuunta Jumlada ah ee Daadiyaha - Saabuunta dareeraha Heerkulbeeg otomaatig ah - LETO
Xiga: LED Maydho Hand